Madaxweyne Geelle: Waan sii kordhineynaa ciidanka naga jooga Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo jaaliaydaha Soomaaliyeed soo dhaweyn weyn ugu sameeyeen magaalada Minnepolis ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in caalamka uu usoo jeestay sidii Soomaaliya looga saarin lahaa dhibaatada mudada aadka udheer ay ku soo jirtay.
Madxweyne Geelle ayaa shacabka Soomaaliyeed kula dardaarmay maadaam Caalamka uu usoo jeestay Soomaaliya inay muujiyaan wada jir iyo midnimo.
“Soomaaliya maanta ayay ugu wanaagsantahay marka waxaa la idinka rabaa inaad muujisaan midnimo iyo wadajir” ayuu yiri Ismaaciil Cumar Geelle oo ka mid ahaa madaxdii ka qeybgashay shirkii Mareykanka iyo Afrika ku dhaxmaray magaalada Washington ee dalka Mareykanka.
Wuxuu sheegay madaxweyne Geelle in dowladda iyo dadka Jabuuti aysan marnaba joojin doonin taageera ay la garab istaagan yihiin shacabka Soomaaliyeed.
“Ciidankeenna waan kordhineynaa ilaa inta Al-shabaab laga sifeynayo wadanka” ayuu yiri Madaxweynaha Dalka Jabuuti oo intaa ku daray in waxa dhimanaya labada dhinacba ay yihiin Soomaali.
Soomaaliya ayaa waxa ay ka midtahay dalalka dibudhaca ay ku keeneen qabyaalada iyo dagaalada hase yeeshee dadka ka faalooda Somalia ayaa waxa ay sheegaan in Somalia ay kasoo kaban doonto dibudhaca hadii ay midoobaan.